သရက်သီးစိမ်းသနှပ် ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
Friday, February 07, 2014 Taunzalat
မုန်ညှင်းစေ့ .........................၃ ဇွန်း(......။..........)
ပဲဆီ +နှမ်းဆီ........................၂ ခွက် ( လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံး)
အရောင်တင်မှုန်. ..............၁ ဇွန်း(ထမင်းစားဇွန်း)
နနွင်းမှုန်. ........................၁ဇွန်း (.........။........)
ပဲနံသာစေ့( မေထိ ).............၅ ဇွန်း (........။.........)
သရက်သီးတွေခြောက်ပြီဆို ၊ဆား၊ သကြား၊ အရောင်တင်မှုန်. ၊ နနွင်းမှုန်.၊
အဖုံးလုံသော ဖန်ပုလင်း ၊ စဉ်. ၊ ကြွေအိုးများများထည့်ပြီး..သုံးရက်လောက်
နှပ်ထားတဲ့ သရက်သီးကို ထည့်ပြီး..၃ မိနစ်ခန်.မီးအေးအေးမှာမွှေပေးကာ
(၇) ရက်လောက်ဆိုစားလို.ရပြီဆိုပေမယ့်...(၂) ပတ်လောက်ကြာမှစားရင်
ပဲနံသာစေ့ လို.ခေါ်တဲ့မေထိ အစေ့လေးတွေပါ ..အင်္ဂလိပ်လို ( Methi (0r) Fenugree